कान दुखेको छ ? यस्तो छ घरेलु उपचार « Anumodan National Daily
﻿ कान दुखेको छ ? यस्तो छ घरेलु उपचार
नुहाउँदा पानी पस्यो भने कान दुख्छ । कुनै फोहोर वा किरा पस्यो भने पनि कान दुख्छ । कतिलाई कान आन्तरिक समस्या पनि हुन्छ । कान दुख्नु आम समस्या हो । यसले सबैभन्दा बढि साना बच्चाहरुलाई दुख दिन्छ ।
कान दुख्नुका धेरै कारण हुन सक्छन् । रुघाखोकी वा कानमा पानी पस्नु यसका मुख्य कारण हुन् । यसैगरी कानमा फोहोर जम्मा हुने, इन्फेक्सन वा कानभित्र किरा पस्दा पनि कान दुख्न सक्छ । कान दुख्दा सुनाई पनि कम भएको महसुस हुन्छ र कहिलेकाहीँ चिलाउँछ पनि । कानको यस्तो समस्यालाई सामान्य घरेलु उपायहरुद्वारा ठीक पार्न सकिन्छ ।
कानको दुखाईमा तुलसीको पत्ता एकदम फाइदाजनक हुन्छ, किनकी यसमा एन्टी ब्याक्टेरियल र एन्टी फंगल गुण हुन्छ ।
यसका लागि तुलसीको पत्ताहरुलाई पीसेर यसको रसको दुई तीन थोपा कानमा हाल्नुपर्छ । तुलसीको रसले कानको इन्फेक्सन ठिक गर्छ र दुखाई पनि हटाउँछ । कानभित्र घाउ भएको छ भने पनि यसले ठिक गर्छ । यद्यपी जटिल अवस्थामा भने घरेलु विधि अपनाउनुअघि चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ ।
लसुनमा पनि एन्टिसेस्टिक गुण हुन्छ र यसले दुखाई हटाउँछ । यसका लागि लसुनको दुई कल्लीलाई राम्ररी पिसौं । यसमा एक चिम्टी नून मिलाएर ऊनको कपडामा पोको पारी दुखेको ठाउँमा राख्दा आरम हुन्छ । यसका साथै लसुनको तीन-चार कल्लीर्लाइ तोरीको तेलमा भुटेर उक्त तेललाई कानमा हाल्नुपर्छ । यसले पनि फाइदा मिल्छ ।
जैतुनको तेल पनि कानको दुखाईमा एकदमै फाइदाजनक हुन्छ । यो तेलमा दुखाई क मगर्ने गुण हुन्छ । साथै यसमा त्वचाका लागि थुप्रै पोषक तत्व पनि हुन्छन् । जैतुनको तेललाई अलिअलि तातो बनाउने र कानमा हाल्ने । यसले केही बेरमै काम दुखेको ठीक हुन्छ । कपासलाई तेलमा डुबाएर कानभित्र राख्न पनि सकिन्छ ।
मुलाको पातले कानको दुखाईलाई सजिलै ठीक गर्छ । यसका लागि मुलाको पातलाई पिसेर यसको रस निकाल्नुस । अब यो रसलाई तिलको तेलमा धेरै बेरसम्म पकाउनुपर्छ । जब रस वाफ बनेर उडिसक्छ, यो तेललाई कपडाले छानेर सिसीमा भरौं । जतिबेला काम दुख्छ, यो तेललाई अलिअति तताएर दुई-तीन थोपा कानमा हाल्नुस । यसबाट कान दुखेको तुरुन्तै ठिक हुन्छ । यो एक वर्षसम्म बिग्रिदैन ।
प्याजमा पनि दुखाई कम गर्ने गुण हुन्छ । यदि दैनिक प्याज खाने हो भने पचान प्रणाली पनि ठिक हुन्छ । कान दुखेको बेलामा प्याजको डल्लोलाई आगोमा सेक्नु र त्यसको रस निकालेर कानमा हाल्नुपर्छ । यसबाट तुरुन्तै आराम मिल्छ ।